Erihu anotaura kuti Jobho akarasika (1-16)
Jobho anoti akarurama kupfuura Mwari (2)
Mwari akakwirira zvekuti haakanganiswi nechivi (5, 6)
Jobho anofanira kumirira Mwari (14)
35 Erihu akaenderera mberi nemhinduro yake achiti: 2 “Une chokwadi here kuti wakarurama zvekuti ungati,‘Ndakarurama kupfuura Mwari’?+ 3 Nekuti uri kuti, ‘Zvine basa rei nemi?* Zvandiri zviri nani here kupfuura zvandaizova kudai ndakaita chivi?’+ 4 NdichakupinduraIwe neshamwari dzako+ dzauinadzo. 5 Tarisa kudenga uone,Cherechedza makore+ ari mudenga denga pamusoro pako. 6 Kana ukatadza, chii chinomurwadza?+ Kana zvitadzo zvako zvikawedzera, unomuitei?+ 7 Kana wakarurama, unomupei;Chii chaanogamuchira kwauri?+ 8 Uipi hwako hunongokanganisa munhu akaita sewe,Uye kururama kwako kunobatsira mwanakomana wemunhu. 9 Vanhu vanochema kana vachidzvinyirirwa chaizvo;Vanochemera kubatsirwa kubva pautongi hwevane simba.*+ 10 Asi hapana anoti, ‘Mwari ari kupi, Muiti wangu Mukuru,+Iye anoita kuti nziyo dziimbwe usiku?’+ 11 Anotidzidzisa+ kupfuura mhuka dzepanyika,+Uye anoita kuti tive vakachenjera kupfuura shiri dzedenga. 12 Vanhu vanoshevedzera, asi haapinduri,+Nemhaka yekuzvikudza kwevakaipa.+ 13 Chokwadi Mwari haanzwi kuchema kwenhema;+Wemasimbaose haateereri zvakadaro. 14 Ko kuzoti paunonyunyuta uchiti haumuoni!+ Nyaya yako iri pamberi pake, saka unofanira kumumirira nemwoyo wese.+ 15 Nekuti haana kukubvunza zvikanganiso zvako nehasha;Uye haana kukutongera kuita kwako zvinhu usina kufunga.+ 16 Jobho anongoshama muromo wake achitaura zvisina musoro;Anoramba achitaura zvaasingazivi.”+
^ Angava achireva Mwari.
^ ChiHeb., “paruoko rwevane simba.”